Degso Avira Free Antivirus loogu talagalay Windows
Degso Avira Free Antivirus
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (4.58 MB)
Degso Avira Free Antivirus,
Avira Free Antivirus waa antibiyootiko awood badan oo bilaash ah oo loogu talagalay dadka isticmaala ee doonaya inay ka difaacaan kombuyuutarkooda fayrasyada, trojans, tuugada aqoonsiga, gooryaanka, malware iyo waxyaabo kaloo badan.
U fidinta isticmaaleyaasha is-dhexgal si habeysan loo abaabuley iyo xog-warraysi antivirus si joogto ah loo cusbooneysiiyey oo looga soo horjeedo hanjabaadihii ugu dambeeyey, barnaamijku waa doorka koowaad ee isticmaalayaasha doonaya inay ciyaarta ku ciyaaraan xeerarkooda. Avira Free Antivirus, oo si fudud ay u isticmaali karaan isticmaaleyaasha kombiyuutarada heerarka oo dhan, iyadoo ay ugu wacan tahay adeegsigeeda si fudud loo isticmaali karo loona fahmi karo, waxay u soo bandhigeysaa isticmaaleyaasheeda xitaa qaabab isku dhafan qaab fudud.
Avira Free Antivirus, oo si otomaatig ah u bilaabi doonta marxaladda rakibidda fudud ka dib oo xaqiijin doonta amniga nidaamkaaga, waxay ku siineysaa talo ah inaad damiso Windows Firewall inta lagu guda jiro rakibidda. Waqtigan xaadirka ah, goaanka adiga ayaa adiga iska leh. Waad iska joojin kartaa Firewall-ka Windows-ka waxaadna isticmaali kartaa firewall-ka uu Avira kuu soo bandhigi doono, ama waad ku sii socon kartaa Windows Firewall-ka. Waqtigan xaadirka ah, talo soo jeedintaydu waxay tahay inaadan ka saarin Firewall-ka Windows-ka si aad si firfircoon ugu isticmaasho Windows Firewall iyo Avira Free Antivirus firewall labadaba.
Barnaamijku, xawaaraha uu ku baarayo kombiyuutarkaaga khataraha aad ayuu uga sarreeyaa sida caadiga ah, wuxuu iska baarayaa kombiyuutarkaaga si dhakhso leh fayrasyada Dabcan, waqtigan, xaddiga xogta kombuyuutarkaaga iyo fayraska suurtogalka ah ee dilaaca waxay kordhin doonaan waqtiga iskaanka. Avira Free Antivirus waa mid faa iido badan marka loo eego arinkaan, iyadoo siineysa dadka isticmaala ikhtiyaarro badan oo iskaan ah sida darawalada maxalliga ah, darawalada adag ee deegaanka, darawalada laga saari karo, diiwaanka nidaamka Windows, nidaamka iskaan buuxa, iskaanka nidaamka deg deg ah, dukumiintiyada, howlaha firfircoon iyo xulashada gacanta.
Barnaamijka, oo ka ilaalin doona kombiyuutarkaaga dhammaan noocyada khataraha amniga ee laga yaabo inay ka yimaadaan dibedda iyada oo ay ugu wacan tahay muuqaalka sawir-qaadista waqtiga-dhabta ah, wuxuu sidoo kale bixiyaa taageero ammaan oo loogu talagalay websaydhka iyo emaylka. Intaa waxaa dheer, Avira Free Antivirus, oo ka hortageysa nashaadaadka iyo barnaamijyada laga shakiyo ee ay ku ogaato kombuyuutarkaaga, iyada oo ay ugu mahadcelineyso darbigeeda u gaarka ah, waxay siisaa difaac dhab ah oo wax ku ool ah.
Iyada oo adeegsigeeda adeegsigiisu yahay mid fudud oo fudud, kahortagga fayraska waqtiga-dhabta ah, keydka macluumaadka ee sida joogtada ah loo cusbooneysiiyo, emaylka iyo ilaalinta webka, xulashooyinka iskaanka kala duwan, taageerada luuqadda Turkiga, bilaash iyo sababo kale oo badan, Avira Free Antivirus wuxuu ka ilaaliyaa kombiyuutarkaaga khataraha oo dhan. Waa inay noqotaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu horreeya ee isticmaalayaasha doonaya inay sii hayaan.
Astaamaha Antivirus Free Avira:
Iimaylka iyo ilaalinta webka
Joojinta furin iyo waxqabadyo
Ilaalin wax ku ool ah oo ka dhan ah adware iyo spyware
Hal-riix ka saarista fayraska
Rakibo Easy iyo isticmaalka
Isticmaal saaxiibtinimo leh oo casri ah
cusbooneysiin otomaatig ah
Ikhtiyaarrada iskaanka loo qorsheeyay
Isticmaalka Kheyraadka oo hooseeya
Avira Free Antivirus Noocyada
Cabirka Faylka: 4.58 MB
Horumar: Avira GmbH
Wararkii Ugu Dambeeyay: 16-07-2021